Hawl-wadeennada Dalxiisayaasha Tansaaniya Hadda waxay isku khilaafsan yihiin Wasiirka Lacagaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Hawl-wadeennada Dalxiisayaasha Tansaaniya Hadda waxay isku khilaafsan yihiin Wasiirka Lacagaha
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Mudaaharaad ka dhigaya Miisaaniyadda Dalxiiska Tansaaniya
Ku dhawaad ​​40 milyan oo doolar oo ay u qoondaysay dawladda Tansaaniya si loo yareeyo saamaynta faafitaanka COVID-19 ee socdaalka iyo warshadaha dalxiiska ayaa si weyn u kala qaybisay daneeyayaasha muhiimka ah meelaha mudnaanta leh ee la maalgashanayo.
Lacagtan ayaa qeyb ka ah 567.25 milyan oo dollar oo dayn ah oo ay ansixisay hay’adda lacagta adduunka ee IMF.
Amaahda waxaa loogu talagalay in lagu taageero dadaallada adag ee mas'uuliyiinta Tansaaniya ee wax ka qabashada masiibada iyadoo wax laga qabanayo caafimaadka degdegga ah, bani'aadamnimada, iyo saameynta dhaqaalaha.
Mashruucyada waxaa ka mid ah dib-u-cusboonaysiinta kaabayaasha, rakibidda nidaamyada amniga, iyo iibsashada xirmooyinka baaritaanka COVID ee wareega.
Iyadoo Wasaaradda Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska ay si gooni gooni ah u qoondeysay qeyb libaax oo ka mid ah xirmada $39.2 milyan oo ay u qoondeysay dowladda dhexe si loogu taageero soo kabashada warshadaha dalxiiska oo balaayiin dollar ku kacaya si loo dayactiro si adag loona soo iibiyo kaabayaal jilicsan oo cusub, ciyaartoyda gaarka loo leeyahay ayaa qalad ku galay. guurto, isagoo sheegay in aysan keeni doonin natiijooyinka la filayo.
Laba toddobaad ka hor, Wasiirka Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska, Dr. Damas Ndumbaro, ayaa soo saaray bayaan uu ku muujinayo dhowr mashruuc oo lacagta lagu maalgelin doono iyadoo la aaminsan yahay in dib loo soo nooleeyo dalxiiska dalxiiska ee ay hoobteen COVID-19 masiibada.
Si sax ah, wasiirku wuxuu sheegay in qayb badan oo ka mid ah dhaqaalaha loo isticmaali doono in lagu dayactiro waddooyinka leh isku dar ah 4,881 km iyo gudaha jardiinooyinka muhiimka ah ee Serengeti, Katavi, Mkomazi, Tarangire, Nyerere, Kilimanjaro, Saadani, iyo Gombe iyo sidoo kale Aagga ilaalinta Ngorongoro.
Xirmadu waxa kale oo ay aadi doontaa in lagu taageero Hay'adda Adeegyada Kaymaha ee Tansaaniya (TFSA) ee ay dawladdu maamusho iyo Maamulka Maareynta Duurjoogta Tansaaniya (TAWA) hawlahooda ilaalinta duurjoogta iyo kaymaha.
Wasaaraddu waxa kale oo ay qorshaynaysaa in ay ku maalgeliso lacag aad u tiro badan si ay u hesho tas-hiilaadka gaadiidka la xidhiidha dalxiiska, waxa ugu muhiimsan ee ay ka mid yihiin doon qurux badan oo dhalada hoose ka samaysan si ay ugu adeegto badweynta Hindiya oo la geeyo Jasiiradda Kilwa si ay dalxiisayaasha ugu soo bandhigto aragti aan kala go’ lahayn. flora iyo xayawaanka biyaha hoostooda ka imanaya doonta dhexdeeda.
"Mashruucyadani waxay fududeynayaan helitaanka goobo dalxiis oo kala duwan, soo saarista alaabada cusub ee dalxiiska si ay u kala duwanaadaan hawlaha dalxiiska si ay u qabtaan suuqa dalxiiska ee soo baxaya, ka dibna dib u soo nooleynta warshadaha dalxiiska," Dr. Ndumbaro ayaa ku xusay hadal uu soo saaray.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartoyda muhiimka ah ee dalxiiska ayaan ku qanacsanayn kharashka la soo jeediyay ee loogu talagalay in lagu taageero soo kabashada warshadaha ee kaabayaasha adag iyo kuwa jilicsan, iyaga oo sheegaya in dawladdu ay tahay in ay u isticmaasho xirmo kicin ah si loo gaaro soo kabashada degdegga ah iyo soo celinta degdegga ah ee maalgashiga.
The Ururka Dalxiisayaasha Dalxiiska Tansaaniya (TATO) iyadoo in ka badan 80 boqolkiiba suuqa ganacsiga dalxiiska ee Tansaaniya ay sheegayaan in dhaqaalaha loo isticmaalo in lagu taageero soo kabashada warshadaha inta badan iyada oo loo marayo qaybta gaarka ah iyo habka ugu habboon, taas beddelkeeda waxay kicin doontaa qaybaha kale ee qiimaha iyo qiimaha. silsiladaha sahayda.
Sidaas awgeed, tani waxay soo kaban doontaa kumanaan shaqo oo lumay waxayna dakhli u soo saari doontaa dhaqaalaha, TATO ayaa bayaan ku sheegtay.
"Lacagta waa in la siiyaa maal-gashadayaasha ganacsiga gaarka loo leeyahay si ay u helaan dib u habeynta deymaha ee dulsaarka hoose ee muddada dheer gaar ahaan soo kabashada ee maaha maalgashi cusub," ayaa lagu yiri bayaanka TATO oo uu saxiixay guddoomiyaheeda, Mr. Willbard Chambulo.
TATO waxay soo jeedisay in qaybta lacagtu ay sidoo kale hoos u dhigto VAT-ka dalxiiska, lacag badan oo la siiyo hay'ad suuqgeyneed oo ay dawladu maamusho, Tanzania Tourists Board (TTB), si ay awood ugu yeelato kor u qaadida meesha loo aadayo si hufan si loo ilaaliyo warshadaha muhiimka ah wejiga. tartanka cutthroat ka mid ah asxaabta.
"Waxaan ku faraxsanahay xirmada ay dowladeenu ku dhawaaqday ee loogu talagalay warshadaha dalxiiska, anagoo u maleynayna inay tahay xabbad waqtigeedii ku dhacday gacanta warshadaha jilicsan, maadaama ay soo dedejin doonto soo kabashada, laakiin nasiib darro tani ma dhacayso" ayaa lagu yiri bayaanka TATO.
TATO waxay soo jeedisay in lacagaha lagu daro raasumaalka shaqada ama deymaha leh heerka dulsaarka hooseeya ee gacmaha hawlwadeenada dalxiiska ee dhibka badan ku dhacay iyo daneeyayaasha kale si ay dib u bilaabaan ganacsiga mar haddii baananka aysan siinin xitaa credits dheeraad ah.
"Bixinta dulsaarka hoose iyo raasumaalka shaqada muddada dheer ama amaahda safarka iyo ciyaartoyda dalxiisku waxay ka caawin doontaa inay u adeegaan waajibaadyada jira iyo inay maalgashadaan meelaha istiraatiijiga ah ee muhiimka ah si loo soo nooleeyo warshadaha dalxiiska si ka dhakhso badan kaabayaasha," ayuu ku dooday madaxa TATO.
Guddoomiyaha TATO Mr. Chambulo ayaa ka soo xigtay madaxweynaha Samia Suluhu Hassan in Wasaaradda iyo daneeyayaasha dalxiisku ay wada fariisan doonaan oo ay ku heshiin doonaan meelaha mudnaanta leh si lacag loo geliyo dib u soo celinta warshadaha.
“Waxa aan xasuusto, Marwo Samia Suluxu Xasan waxa ay noo sheegtay waaxda gaarka ah iyada oo ku sugan New York, aniguna waxa aan u joogay shakhsi ahaan in aan wasaaraddayada la fadhiisto oo aan ka wada hadalno kharashaadka ku baxaya lacagahan, laakiin naxdinta nagu noqotay, waxa aanu kaliya akhrinay wargeysyada sida lacag ayaa loo qoondeeyay,” Mr. Chambulo ayaa xusay.
Kahor inta uusan dillaacin cudurka 'coronavirus', xogta Bangiga Tansaaniya (BoT) ayaa muujineysa in dalxiiska 2019 uu soo jiitay 1.5 milyan oo dalxiisayaal ah oo dhaqaalaha kasbaday $2.6 bilyan markii ugu horreysay, isagoo noqday hormuudka lacagaha qalaad.
Sanadka 2020, warbixintii ugu dambeysay ee Bangiga Adduunka ayaa muujineysa, dalxiiska ayaa hoos u dhacay 72 boqolkiiba, taasoo ay ugu wacan tahay saameynta xun ee COVID-19 masiibada, taasoo keentay in ganacsiyadii waaweynaa la xiro oo sababay shaqo ka fariisin aan horay loo arag.
"Sida aan hadda u hadleyno, kumanaan shaqaale ah ayaa weli ku sugan guriga, maadaama aan la halgameyno inaan ku soo nooleyno warshadaha gacmo madhan. Waxaan leenahay deyn bangi oo dano ayaa is urursanaya. Sida haddii aanay taasi ku filnayn, ma jiro bangi danaynaya inuu na siiyo credit mar dambe; run ahaantii waa nalaga tagay inaan dhimanno,” ayuu yidhi.
“Aniga oo ah Guddoomiyaha Ururka TATO, waxaan rabaa in aan u mahadceliyo Madam Madaxweyne Xasan oo heshay deyn oo ay u qoondeysay $39.2 milyan dalxiiska si loo soo nooleeyo warshadaha. Waxaan u soo jeedinaynaa Wasaaradda inay amaah siiso ganacsiyada la aamini karo si ay awood ugu yeeshaan inay ku noqdaan halkii aan joognay kahor COVID-19; dadkeenii ku soo celiya shaqadoodii; dayactirka guryaha, xerooyinka teendhooyinka, baabuurta; oo aan taageerno wadiiqooyinka ka hortagga ugaarsiga, inta aan si tartiib tartiib ah uga soo kabsaneyno," ayuu yiri.
"Waxaan ku soo laaban doonaa ganacsiga mar kale, deynta IMF-ta waa in aan dib u bixinaa annaga ama carruurtayada iyo carruurtayada. Amaahda waa in lagu duraa ganacsiga si loo abuuro faa'iido, loo abuuro shaqo, loona bixiyo canshuur," Mr. Chambulo ayaa xusay.
Iyada oo waaxda dalxiisku si tartiib tartiib ah ugu gudubto qaab ka soo kabasho adduunka intiisa kale, warbixintii ugu dambeysay ee Bangiga Adduunka waxay ku boorinaysaa mas'uuliyiinta inay eegaan adkaysigooda mustaqbalka iyagoo wax ka qabanaya caqabadaha socda ee dheer kuwaas oo gacan ka geysan kara in Tansaaniya loo dhigo horumar sare oo loo dhan yahay.
Warbixintii u dambeysay ee Bangiga Adduunka ee Tansaaniya, Beddelka Dalxiiska: Dhanka Waar Joogta ah, Adag, iyo Waax Loo Dhan Yahay, ayaa iftiimisay dalxiisku udub dhexaad u ah dhaqaalaha dalka, maciishada, iyo dhimista faqriga, gaar ahaan haweenka kuwaas oo ka kooban 72 boqolkiiba dhammaan shaqaalaha dalxiiska qayb-hoosaad.
Ciyaarta wuxuu leeyahay,
Nofeembar 13, 2021 at 18: 00
IMF waligeed ma aysan caawin hal dal oo faqiir ah. Waa aaladda ay quruumaha qaniga ahi ku cabudhiyaan ummadaha saboolka ah. Dal sabool ah, Tansaaniya hadda waxay u jihaysan doontaa burbur.
Amaahda Guryaha ee Hemp wuxuu leeyahay,
Nofeembar 2, 2021 at 08: 14
Tixgeli inaad qorshayso sanadkaaga farqiga u dhexeeya si aad isaga ilaaliso xilliyada dalxiiska ee sareeya si aad u badbaadiso lacagta hoyga, safarka, iyo hawlaha. Isticmaalka keliya ee daroogada sharci darrada ah ee adduunka ugu weyn, si kastaba ha ahaatee, wuxuu weli u muuqdaa inuu yahay United. Iyadoo Japan aysan weli diyaar u ahayn inay soo dhaweyso dalxiisayaasha ajnabiga ah ee soo laabanaya, rajadu waxay ugu dambeyntii raadineysaa kaydka la xiriira safarka dalka ee go'doonsan.